အရသာမှာဆိုထူးကဲတဲ့ ကောင်းကောင်းမာလာရှမ်းကော – FoodiesNavi
By May Me Lin On May 21, 2018 0
လတ်ဆတ်တဲ့ပင်လယ်စာတွေထဲမှလူအများစုပိုမိုပြီးကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ဂဏန်းဟင်းလျာကိုကောင်းကောင်းဆိုင်မှာအရသာ ၂ မျိုးနဲ့တီထွင်စီမံချက်ပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ထမင်းမြိန်မြိန်စားချင်သူများအတွက် ကောင်းကောင်းမာလာရှမ်းကောကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ ကောင်းကောင်းမာလာရှမ်းကောဆိုင်ခွဲတွေရဲ့လိပ်စာကတော့–ကောင်းကောင်းမာလာဟင်းနှင့်ဂဏန်းချက် အမှတ်(၆)၊ ရတနာလမ်း၊ ၁၆ကွေ့မှတ်တိုင်အနီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့မှာတစ်ဆိုင်၊ အမှတ်(၃၂၄)၊ ၃လွှာ၊ Myanmar Plaza၊ ရန်ကုန်မှာတစ်ဆိုင်၊ အမှတ် (၀၁၇)၊ ၅လွှာ၊ Junction City၊ ရန်ကုန်မှာတစ်ဆိုင် ဖွင့်လစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ဂဏန်းအရသာချိုချိုလေးကိုအချဉ်အစပ်ဟင်းအနှစ်လေးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဂဏန်းချဉ်စပ်ဟင်းလျာကိုရွေးချယ်နိုင်သလို လတ်ဆတ်တဲ့ဂဏန်းရဲ့သဘာဝအချိုအရသာကိုပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်တရုတ်မဆလာလေးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ တရုတ်မဆလာဂဏန်းချက်လေးကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အရသာရှိလှတဲ့ဟင်းလျာများစွာကိုကောင်းကောင်းမှာ မှာယူသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီနော်။
နောက်ပြီးစားသုံးသူတွေသွားရည်ယိုသွားစေမှာ ကောင်းကောင်းရဲ့မာလာပုဇွန်စပ်မွှေးဟင်းလျာ…မစားဖူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်းမှာစားသုံးကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ စားပြီးရင်ထပ်စားချင်စေပါတယ်။ ပုဇွန်လေးရဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ချိုမြမှုကိုခေါပုတ်ရဲ့အစိမ့်အရသာလေးနဲ့စီမံထားတာဆိုတော့ ပြောရင်းနဲ့တောင်ပြေးပြီးသွားစာချင်စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်နော်။ နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကြံမဆိုင်ငါးဟင်းရည်လေးကို ကောင်းကောင်းဆိုင်ရောက်တဲ့အခါဝင်ရောက်သုံးဆောင်ကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့သဘာဝငါးကြင်းသားနုအိအိလေးကိုတမူထူးခြားစွာအချဉ်စိမ်ပြီးစီမံထားတဲ့ကြံမဆိုင်ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ပူပူရှိန်းရှိန်းမွှေးပျံ့ပျံ့ငရုတ်ကောင်းနံ့လေးနဲ့အတူဆေးဖက်ဝင်သဘာဝဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေစုံလင်စွာဖြင့်အချိုးကျစီမံချက်ပြုတ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးချိုချဉ်စပ်မွှေးကြံမဆိုင်ငါးဟင်းရည်လေးကို သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ပျော်ရွှင်စွာစားသောက်ချိန်လေးကို ကောင်းကောင်းဆိုင်မှာဖန်တီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီးအရသာမှားထူးကဲတဲ့ Hong Kong Style ဟင်းလျာတွေကိုစားသုံးချင်တယ်ဆိုရင် ကောင်းကောင်းစားသောက်ဆိုင်မှာရရှိနိုင်တယ်နော်။ ကောင်းကောင်းမာလာရှမ်းကောမှာ လတ်ဆတ်ပူနွေးတဲ့ဟင်းလျှာတွေကိုခံစားသုံးဆောင်ပြီးဆောင်းရာသီရဲ့အေးချမ်းမှုနှင့်အတူ ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့နွေးထွေးစွားဖြတ်သန်းလိုက်ကြစို့။
Kaung Kaung Malar Shan Kaw Facebook Page : www.facebook.com/kgkgmalar/
In Restaurant Guides Tagged Fresh Juice, Hong Kong Style, various kinds of delicious curry Leaveacomment
အံ့မခန်းတဲ့တီထွင်ဖန်ဆင်းမှုလက်ရာတွေကြောင့် ? ? ? အံ့သြပျော်ရွှင်သွားရစေမယ့် ………………